I-SAT Amanqaku okuthelekiswa: NCAA Intaba yeNtshonalanga yeNtshonalanga
Idatha ye-Admissions ye-Admissions yama-11 Amalungu eNkomfa ye-NCAA yeNtshonalanga yeNtshonalanga
Ukuba uyazibuza ukuba unayo izikolo ze-SAT uzakufuna ukungena kwelinye leyunivesithi yeNtshonalanga yeNtshonalanga , noluhlu lugxininiso lwamanani kwi-50% yabafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yezi ziko.
Qaphela, ke, ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa amaninzi e-admissions kwiiNyuvesi zeNtshonalanga zeNtshonalanga ziza kukhangela irekodi ephakamileyo yesikolo , isicatshulwa esenziwe kakuhle kunye nemisebenzi yecandelo elongezelelweyo .
Unokujonga kwakhona ezinye izixhumanisi ze-SAT (okanye ii- ACT links ):
Intshonalanga yeNtshonkqo yeNgqungquthela yeNgqungquthela yokuThatanisa
Amajoni omoya 600 690 620 720 - -
State Boise 460 580 455 570 - -
State Colorado 510 620 510 630 - -
State Fresno 400 500 400 510 - -
ENew Mexico 470 600 480 600 - -
State of San Diego 490 600 510 620 - -
KwiYunivesithi yaseSan Jose State 450 560 470 590 - -
IUnited State University 490 610 490 610 - -
UMTHETHO Ulinganisa ukungeniswa kwiikholeji zeeNgqungquthela zaseMzantsi naseYunivesithi
Yintoni i-TOEFL Score Ngaba kufuneka ufike kwiKholeji?
Amanani ngaphambi nangemva kwamaphepha okusebenzela - 1 ukuya ku-100
Indlela Yokuba Umkhandi - Iminyaka YeSikolo kunye Nezinyathelo Zokuthatha
I-Memes i-Funny Meme Skewering i-2016 Abaviwa be-GOP